Lixda lixaad Allaha na qabto haddaad lix bilood ku darsatid
“Gorgor garab ka jaban meelna waa uma gurguurtaane
Laga guurye odaygiina yaa gurada saaraaya”.
Allaha u naxariistee waa sheeko uusan Aadan Carab soo gaarin. Meeqa jeer baa Ina Cabdi Xaashi go’aan soo saaray dabadeedna inta C/hi Puntland tagay beeneeyey? Isla Aadan-Carab wuxuu markaanoo kale dhahaa:
Afartaa inaan dhahay bal yaa igu dhalliilaaya?
Arrintaas aan sheegay yaa shaki uga jiraa? Teeda kale odayga wax qabsada ma la waayey? Muxuuse dad dambe hortiis, C/hi dabadii la tegin? Teeda kale haddaan hadalkiisu soconeyn maxaa waalaya, muu iska fiirsado sida C/hi wax yeelo? Yaa hadda u musaafurinaya halka ehelkiisu joogo?
Oo ma C/hi baan aqoon maansada Aadan-Carab? See buusan u aqoon! Waxaan filayaa inuu C/hi ka helo tixdan markuu Cadde Muuse, Maxamed Cabdi Xaashi iyo C/Raxmaan Faroole haysto:
Siduu Xayle madax reer tolkii ugu muraaddeeyey
Uu kii is-muujaba xabsiga ugu malaasaayo
Yaa ii malowdaye intii muuqataan dilaye
Isaguba masuuliyad u diid reer-Mokaannniba e’
Ina-Mililiq buu Xabashi yidhi hooy mid ka ahoow e’
Iyagoo manjaha ciid ka badan ama malyuunaada
Inuu kaligi malabkooda cuno waydin maqashaane
Goortuu xanjada muudsadee miidda ka idlaysto
Uu waxa macaan kala baxuu murudka siiyaaye
Ma muddaahaneeyee haddana waa maroorsadaye
Anigana ninkaan mood i odhan waan maraanmariye
Mandheeraan idiin dirin dadyow ii musuusuqiye
Maqsin baan idiin furin hadhuudh lagu masruuftaaye
Baddaa murugtay baan moolka dhexe idin muquursiine
Waa idin masaafurin ilaa toban kun oo mayle
Haddaan Samatar meeshuu fadhiyey kaga maqnaan waayey
Uu Cumar markaan maagganaa moosin ila jiidhay
Ma cid baan martabad siinaya malaki soo maahi?
Runtii C/hi taas wuu ku run sheegay oo meesha isagaa diiq ka ah. Markuu Aadan yiri:
C/hi wuxuu Cadde Muuse ku leeyahay ninyahow ina-boqorkaaga ma aqaanne meel cagaha dhig oo dadkaas Puntland jooga mid ka mid ah noqo. Markuu Aadan-Carab leeyahay:
C/hi wuxuu Puntland ka saaray Maxamed Abshir, Xasan Abshir iyo Jaamac Cali Jaamac. Nimankaasi ceeb ma leh ee cidahooda baa ciilay halka C/hi ood arageen ay ciddiisu u haysato inuu caalim yahay, caddaaladdana ku fiican yahay. Kaaga daran waxay u caleemo-saarayaan inuu carrada (Soomaaliya) hogaamiyo halka qolyahaasi raggoodii ay carri shisheeye u direen. Ogaada hadda la ma joogo waqtigii dowladdii kacaanka. Qofkaan ciddiisu ciilin, cidi ma ciili karto. Weligiin ma maqasheen hogaamiye-kooxeed Xamar oo C/Qaasim Xamar u diiday? Maya oo nin qabiil haysta C/Qaasim Xamar uma diidi karo laakiin wakaas C/hi dadkii wada cayrshay. Markuu Aadan-Carab leeyahay:
C/hi wuxuu leeyahay haddaan Faarax Dheere ku dilay Garoowe dhexdiisa, Hurrana duhur ku toogtay kala-bayr, Gaalkacyo dhexdeedna rag ku dilay ma Ina Cabdi Xaashi baan u daahayaa oo iga hor imaankara? Maya allaylehe suu toban jeer ka badan buu qoraal aan micno lahayn soo saaree. Cali-Dhuux Allaha u naxariistee markuu lahaa:
Dhambaal lalama yaaciyo waraaq sida dhabiilleede
Horta wixii dhacay dhace laakiin waxaan shaki lahayn inay C/hi uga dhammaatay Puntland marka la gaaro 31 Juulaay/Luuliyo 2004. C/hi wuxuu bartay sida kubbad-siyaasadeedka loo ciyaaro oo wuxuu gartay in loo dhigay ilaa 6 rigoore marka wuu yaqaan in inta jeer ee la tuurto rigooraha la yareeyo ilaa lakala raynayo. Marka faraq uma dhaxeeyo haddaad labo sano sheegatid iyo haddaad hadba lix bilood ama seddex ku darsatid laakiin: duq gaboobay iyo wiil yar baa loo dadaa hadal. Qamaan Bulxan baa taas noo dhigay. Marka C/hi waxaan xasuusinaynaa in horay loo yiri:
Toddobaatan ruux jira, tunkeyguba ma qaadee, tasho baan ku leeyahay.
Marka hadda sideetankii baad gashaye adna tasho.
Sida Soomaalidu u tiraahdo: ido indhahood waa riyo marka reer Mudugga ayaa Puntland indho u ahe bal marka iyagu ha u hor bilaabeen rididda C/hi. C/hi annaguu naga yimid, annagaana ridayna. Marka Cadde Muuse iyo Maxamed Cabdi Xaashoow, shacabka reer Mudug iyo C/hi mid taageera.
Afeef: Aragtida qoraalkanwaxaa lehqoraaga ku saxiixan.